Kulammada Golaha Shacabka: In ku dhaw kala bar ayaa maqan mar walba – Kalfadhi
Kulammada Golaha Shacabka: In ku dhaw kala bar ayaa maqan mar walba
November 1, 2018 November 1, 2018 Kalfadhi
Xildhibaanno badan oo aan xaadirin kulammada Golaha Shacabka iyo kuwa mar danbe taga fadhiyada golaha ayaa waxaa ka dhashay su’aalo badan. Waxaana soo hadal qaaday arrintan xildhibaanno dhowr ah oo kahor hadlay golaha.
Golaha Shacabku wuxuu toddobaadkii fariistaa seddex maalin haddii uusan ku jirin fasaxyada u dhaxeeya kalfadhiyada ama aanan lagu baaqin shir degdeg ah. Sidaasi oo ay tahay, kulammada golaha waxaan xaadirin xildhibaanno ka tiro badan kuwa fadhiya.
Haddii aan eegno kulammadii ugu danbeeyay ee golaha shacabka uu yeeshay ee kalfadhiga 4-aad waxaa ka maqnaa fadhiyada la qabtay xildhibaanno ku dhaw kala bar xubnaha aqalka hoose oo dhan tiro ahaan 275 xildhibaan.
Tusaale, kulamadii 10-aad, 11-aad, 12-aad, 13-aad, 14-aad iyo 15-aad ee kalfadhiga 4-aad ee golaha waxaa soo xaadiray 174, 151, 152, 156, 145, 145 si isku xigta. Intaa waxaa dheer in xubno ka soo dib dhacaan kulammada isla markaana mar danbe ku soo biiraan.
Intaas waxaa dheer in kulammada qaar ay u baaqdeen kooram la’aan, sida kulan ay mudanayaashu ku ballansanaayeen 26-kii bishii Sibteembar, maalin isniin ah kuna asteysnaa kulankii 7-aad ee kalfadhigaan, kulankaas waxaa soo xaadiray 120 xildhibaan kaliya.
Maalinkaas guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Shiikh Ibraahim ayaa nasiib darro ku tilmaamay in maalinka Mooshin uu jiro xildhibaannadu wada yimaadaan, maalmaha kalana kooram la’aan ay u baaqdaan kulammada Golaha Shacabka.
kulammadaas oo idil ka daawo kannaalka youtube-ka ee warbaahinta Kalfadhi
Baaqa ganaaxa iyo ciqaabta
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo kamid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay ilaalinta wakhtiga intii uu socday kalfadhigii 3-aad ee golaha isaga oo guddoonka kula taliyay in ciqaab loo sameeyo xildhibaanada soo daaha.
“In qofna (Xildhibaan) yimaado sagaalka subaxnimo, qofna lix saac yimaado,wax shaqeyn kara ma aha,” ayuu yiri xildhibaan Warfaa.
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka hadlayay kulankii 19-aad ee kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka ayaa carrabka ku adkeeyay xildhibaannada aanan soo xaadirin kulammada isaga oo ku tilmaamay wax laga xummaado oo nasiib darro ah. Ciyaar jecel waxa uu xildhibaannada qaarkood ku tilmaamay kuwa ku ilaashada kurisga hantidooda.
Waxaa uu soo jeediyay in ciqaabteeda la marsiiyo xildhibaanka aanan imaan kulammada isaga oo ku taliyay in mushaarka laga jaro inta uu maqnaa.
Xildhibaan Abdi Shire Jama oo sheegaya in xildhibaannada qaar ay kurisga ku ilaashadaan hanti ay leeyihiin, aysana soo xaadirin kulammada Golaha Shacabka.
Posted by Kalfadhi on Wednesday, October 31, 2018
Xeer hoosaadka iyo xaadiridda fadhiyada golaha
Xeer-hoosaadka baarlamaanka waxa uu dhigayaa dhowr tallaabo oo ay tahay in la qaado isla markaana la xiriira xaadiridda fadhiyada golaha baarlamaanka waxaa kamid ah in haddii la gaaro 11:00 AM la joojinayo diiwaangelinta xildhibaannada, waxaana buugga (liiska) loo gudbinayaa xafiiska guddoonka Golaha Shacabka.
Mudanayaasha ka soo daba mara 11:00 AM, waxaa lagu qori doonaa liis gaar ah iyadoo soo daahidda shan (5) maalmood lamid tahay maqnaansho hal maalin, waxaana la xisaabinayaa dhammaadka kalfadhi kasta.
Waxaa xusid mudan inaysan wali dhicin xildhibaan la marsiiyay hannaanka ciqaabeed ee ku yaalla xeer-hoosaadka baarlamaanka marka laga hadlayo imaanshaha wakhtiga kulanka iyo maqanaanshaha intaba.